ဆိုးရှား မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျအသငျးအတှကျ မညျမြှ ပွီးပွညျ့စုံအောငျ ပွငျဆငျထားပွီလဲ? - Myanmar Football Arena
ဆိုးရှား မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျအသငျးအတှကျ မညျမြှ ပွီးပွညျ့စုံအောငျ ပွငျဆငျထားပွီလဲ?
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျအသငျးသညျ သူတို့၏ အသငျးအားဖွညျ့ ရနျ အတှကျ ရာသီအပွောငျးအရှကေ့ာလတှငျ အငျအားထပျဖွညျ့ရနျ ကွိုးစားသျောလညျး အိုလီ ဂနျနာ ဆိုးရှားသညျ ပွီးပွညျ့စုံသော အသငျးဖွဈအောငျကွိုးစားနပွေီ ဖွဈသညျ။ အခြို့သော ပရီးမီးယားလိဂျ မနျနဂြောမြားသညျ သူတို့တှငျ ရှိသော လူအငျအား အနညျးငယျ အားကို တနျဖိုးထားမွငျ တတျကွသျောလညျး အမြားစု မနျနဂြောမြားမှာမူ ဘောလုံးကစားသမားတဈနရော ခငျြး စီ အတှကျ အရံအငျအား နှဈဦး စီ ထားရှိသညျ ကို နှဈသကျကွသညျ။
အိုလီ ဂနျနာ ဆိုးရှားသညျ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျးအငျအား အတှကျ ပွီးခဲ့သော နှဦေးရာသီ က ပွငျဆငျခဲ့သျောလညျး ရာသီတဈခု လုံးအတှကျ မလုံလောကျခဲ့ပေ။ ယခု အခါတှငျ ရရှေညျ ကို ကွညျ့သော အားဖွငျ့ ကစားသမား အပွောငျးအရှကေ့ာလ နှဈခု အပွီး နျောဝေးသား သညျ တောငျ့တငျးသော ယူနိုကျတကျ အသငျး နှဈခု စာ ရနိုငျတော့မညျ နီးကပျ နပွေီ ဟု ပွောခဲ့သညျ။
အကယျ၍ ဆိုးရှားသညျ တဈပတျလြှငျ ၄-၃-၃ ကစားကှကျ နှဈကွိမျ ကစားခဲ့ပွီး ကစားသမားမြား တဈပှဲ ပွီး နောကျတဈပှဲ ကစားခငျြ လြှငျ သူ၏ လူစာရငျးကို ကွညျ့ရှု ရမညျ ဖွဈသညျ။
ဂိုးသမား လူစာရငျး ကို လညျး နောကျနှဈ နှအေတှကျ စဉျးစား ရတော့မညျ ဖွဈပွီး လောလောဆယျ တှငျ ဒီး(နျ) ဟနျဒါဆငျ သညျ ၂၀၂၀/၂၁ ရာသီတှငျ ရှိနသေျောလညျး ရရှေညျ နံပါတျတဈ ဂိုးသမားကို စဉျးစားရမညျ ဖွဈသညျ။ ဒေးဗဈဒီဂီယာ သညျ လောလောဆယျ ဂုဏျရှိသော ကစားသမား အဖွဈရှိနခေဲ့ပွီး ပှဲပေါငျး ၄၀၀ အထိကစား ခဲ့သညျ။ သူ၏ အရံအား အနဖွေငျ့ ဆာဂြီယို ရိုမီယို သညျ ပရီးမီးယားလိဂျ တှငျ အကောငျးဆုံး အရံ အနအေထားဖွငျ့ ရှိနခေဲ့သညျ။
အငျအား – ဒီဂီယာ, ရိုမီယို, ဂရနျ့
ဆိုးရှားသညျ ဤရာသီ တှငျ နောကျတနျးအား သုံးဦးကစားစခေဲ့ပွီး ယခုအခါတှငျ အလယျ နောကျတနျးတှငျ အားဖွညျ့ရနျ စဉျးစားကောငျး စဉျးစားမညျ ဖွဈသညျ။ နောကျတနျး အတှကျ တှငျ အရှေနျ ဝနျဘဈစကာ နှငျ့ လုရှောသညျ ပွောစရာမရှိ ကောငျးမှနျပွီး ဒီအဂေို ဒါလောဒျ့ နှငျ့ ဘရနျဒနျ ဝီလီယံ သညျ လညျး တိုးတကျကောငျးမှနျပွညျ့ ဆကျလကျ နောကျတနျးကို အားဖွညျ့မညျ ဖွဈသညျ။
ဟယျရီ မကျဂှီးရား နှငျ့ ဗဈတာ လငျဒီလော့(ဖျ) သညျ အလယျနောကျတနျးတှငျ အတှဲညီညီ ကစားနိုငျပွီး အဲရဈ ဘလေီမှာမူ ဖဖေျေါဝါရီ လ ကရခဲ့သော ဒဏျရာ မှ နာလနျထူခါစဖွဈနပွေီဖွဈသညျ။ အသကျ ၂၂ ရှိပွီ ဖွဈသော အကျဇဲလျ တှမျဇီဘီ ကို လညျး မြှျောလငျ့ နိုငျပါသညျ။
အကယျ၍ ဆိုးရှားသညျ နောကျတနျး ပထမကစားသမားနရောတိုငျး အတှကျ အရံနှဈဦး စီ မထားခဲ့လြှငျ သူ၏ နောကျတနျးအရံမြားဖွဈသော ဖီးဂြူနျး, ခရဈစမောလငျး နှငျ့ မာကို ရိုဂြို တို့သညျ သူတို့၏ လမျးကွောငျးကို သူတို့စဉျးစား ရတော့မညျဖွဈသညျ။
အငျအား – ဝနျဘီစကာ, ဒါလောဒျ့,လငျဒယျလော့(ဖ),မကျဂှရေား,ဘလေီ,တှမျဇီဘီ,ရှော, ဝီလီယံ
ထှကျနိုငျမညျ့စာရငျး- ဂြူနျး, စမောလငျး, ရိုဂြို
ယူနိုကျတကျ သညျ သူတို့၏ အလယျတနျး အငျအားမွောကျမြားစှာရှိပွီး ဆိုးရှားသညျ ယခု အခါ သူအလယျတနျးကို မညျသို့ကိုငျတှယျ ရမှာလဲ ဆိုတဲ့ အခြိနျ ရောကျပွီ ဖွဈတယျ။
ဂကျြဆီ လငျး နှငျ့ အနျဒရီအေ ပိုငျအီရာ သညျ ဤရာသီ တှငျ တျောတျောရုနျးကုနျခဲ့ရပွီး နောကျ ၁၂ လတှငျ သူတို့ ထှကျ သှားမညျ ဆိုလြှငျ မအံသွ တော့ပါ။ နီမာနျဂြာ မကျတဈ နှငျ့ ဂြူအနျ မာတာ သညျ ၂၀၂၀ တှငျ ပြျောရှငျစှာ ဖွတျသနျးခဲ့သျောလညျး ၂၀၂၁ တှငျ စာခြုပျ သကျတမျးကုနျတော့မညျဖွဈပွီး သူတို့၏ ကစားသမားဘ၀ အတှကျ နားသငျ့သော အသကျအရှယျ လညျးဖွဈလာပွီ ဖွဈသညျ။
သူတို့သညျ ယခုအခါတှငျ စကော့မကျတိုမီနေ, ဖရကျ နှငျ့ ဘရိုနို ဖာနဒေီ(ဈ) တို့နှငျ့ အတူ အလယျတနျး အငျအားတှငျ ကနျြနခေဲ့ပွီး ပေါ ပေါ့ဘာ သညျ နောကျရာသီ အတှကျ ဆကျရှိနမေညျ ဖွဈသညျ။ မကျတဈ နှငျ့ မာတာ တို့ မတညျငွိမျ မှု အပျေါ ဆိုးရှားသညျ အလယျတနျးအတှကျ အားဖွညျ့ရနျ စဉျးစားနသေညျ။ မကျတဈနှငျ့ မာတာ ထှကျသှားခဲ့သညျ ရှိသျော ၂၀၂၁ အတှကျ တဈနရော လှတျနိုငျပွီး ပေါ ပေါ့ဘာ ထှကျခဲ့လြှငျ နှဈ နရောစာ လှတျနိုငျသညျ။
အငျအား – မကျတဈ, မကျတိုမငျနေ, ဖရကျ, ပေါ့ဘာ, ဖာနနျဒီ(ဈ), မာတာ, အသဈသော စာခြုပျခြုပျမညျ့ လူစာရငျး
ထှကျသှားမညျ့ လူစာရငျး – လငျးဂတျ, ပဲအီရာ
ယူနိုငျတကျ အသငျး အတှကျ တိုကျစဈမှုး သညျ တဈနရောစာ လှတျနပွေီး အကယျ၍ အိုဒီယှနျ အီဂါလို သာ သူ၏ အသငျး ရှနျဟိုငျးရှနျဟှာ ကို ပွနျသှားခဲ့လြှငျ နှဈနရောစာ လှတျနမှော ဖွဈသညျ နိုငျဂြီးရီးယနျးသား လေးသညျ အိုးထရကျဖိုဒျ့အတှကျ ခဏတာ ကစားခဲ့ပွီး ၄ ဂိုးသှငျးခဲ့သညျ။ ဆိုးရှား အနနှေငျ့ အသကျငယျရှယျပွီး အနျထျောနီ မာရှယျ နှငျ့ အတူတူ ကစားနိုငျ ရနျ ရှာဖှသေငျ့ပွီ ဖွဈသညျ။
အငျအား – ရကျဖိုဒျ့, ဂြိမျး, ဂရငျးဝုပျ, မာရှယျ, အငျဂလို/စာခြုပျသဈ, စာခြုပျသဈ
ဆိုးရှား သညျ သကျငယျသော ကစားသမား ကလပျတှငျ ဝငျရောကျ ကစားခွငျးကွောငျ့ သူ၏ သကျကွီးပိုငျး ကစားသမားမြား ကို ဖွတျခြ နိုငျပွီ ဖွဈတယျ။ တီမောတယျ ဖိုဆု-မနျဆာ အနနှေငျ့ သူသညျ နောကျရာသီအတှကျ ယူနိုကျတကျ နှငျ့ ထိုကျတနျကွောငျး ပွသနိုငျရနျ ကွိုးစားနပွေီး တာဟဈခြောငျး သညျ နောကျရာသီအတှကျ ပထမ ၁၁ ယောကျ တှငျ ပါဝငျသငျ့ သညျဟု ယူဆပါတယျ။
အိနျဂယျြ ဂိုးမီ(စ) သညျ ယူနိုကျတကျ အတှကျ ထိုကျတနျကွောငျး သသေခြောခြာ ကစားပွရမညျ့ အခြိနျ သညျကုနျဆုံးနပွေီ ဖွဈတယျ။ သို့သျော အခွားသော ကစား သမားမြား ဖွဈသော ဒိုငျလနျ လကျဗဈ နှငျ့ ဂြိမျး(စ) ဂါနာ သညျ လညျး နောကျ ရာသီ အတှကျ ပိုမို ကောငျးမှနျ စှာကစား နိုငျမညျ ဟု မြှျောမှနျး ရပါ သညျ။
=== ZAWGYI —-
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းသည် သူတို့၏ အသင်းအားဖြည့် ရန် အတွက် ရာသီအပြောင်းအရွေ့ကာလတွင် အင်အားထပ်ဖြည့်ရန် ကြိုးစားသော်လည်း အိုလီ ဂန်နာ ဆိုးရှားသည် ပြီးပြည့်စုံသော အသင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပြီ ဖြစ်သည်။ အချို့သော ပရီးမီးယားလိဂ် မန်နေဂျာများသည် သူတို့တွင် ရှိသော လူအင်အား အနည်းငယ် အားကို တန်ဖိုးထားမြင် တတ်ကြသော်လည်း အများစု မန်နေဂျာများမှာမူ ဘောလုံးကစားသမားတစ်နေရာ ချင်း စီ အတွက် အရံအင်အား နှစ်ဦး စီ ထားရှိသည် ကို နှစ်သက်ကြသည်။
အိုလီ ဂန်နာ ဆိုးရှားသည် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းအင်အား အတွက် ပြီးခဲ့သော နွေဦးရာသီ က ပြင်ဆင်ခဲ့သော်လည်း ရာသီတစ်ခု လုံးအတွက် မလုံလောက်ခဲ့ပေ။ ယခု အခါတွင် ရေရှည် ကို ကြည့်သော အားဖြင့် ကစားသမား အပြောင်းအရွေ့ကာလ နှစ်ခု အပြီး နော်ဝေးသား သည် တောင့်တင်းသော ယူနိုက်တက် အသင်း နှစ်ခု စာ ရနိုင်တော့မည် နီးကပ် နေပြီ ဟု ပြောခဲ့သည်။
အကယ်၍ ဆိုးရှားသည် တစ်ပတ်လျှင် ၄-၃-၃ ကစားကွက် နှစ်ကြိမ် ကစားခဲ့ပြီး ကစားသမားများ တစ်ပွဲ ပြီး နောက်တစ်ပွဲ ကစားချင် လျှင် သူ၏ လူစာရင်းကို ကြည့်ရှု ရမည် ဖြစ်သည်။
ဂိုးသမား လူစာရင်း ကို လည်း နောက်နှစ် နွေအတွက် စဉ်းစား ရတော့မည် ဖြစ်ပြီး လောလောဆယ် တွင် ဒီး(န်) ဟန်ဒါဆင် သည် ၂၀၂၀/၂၁ ရာသီတွင် ရှိနေသော်လည်း ရေရှည် နံပါတ်တစ် ဂိုးသမားကို စဉ်းစားရမည် ဖြစ်သည်။ ဒေးဗစ်ဒီဂီယာ သည် လောလောဆယ် ဂုဏ်ရှိသော ကစားသမား အဖြစ်ရှိနေခဲ့ပြီး ပွဲပေါင်း ၄၀၀ အထိကစား ခဲ့သည်။ သူ၏ အရံအား အနေဖြင့် ဆာဂျီယို ရိုမီယို သည် ပရီးမီးယားလိဂ် တွင် အကောင်းဆုံး အရံ အနေအထားဖြင့် ရှိနေခဲ့သည်။
အင်အား – ဒီဂီယာ, ရိုမီယို, ဂရန့်
ဆိုးရှားသည် ဤရာသီ တွင် နောက်တန်းအား သုံးဦးကစားစေခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင် အလယ် နောက်တန်းတွင် အားဖြည့်ရန် စဉ်းစားကောင်း စဉ်းစားမည် ဖြစ်သည်။ နောက်တန်း အတွက် တွင် အေရွန် ၀န်ဘစ်စကာ နှင့် လုရှောသည် ပြောစရာမရှိ ကောင်းမွန်ပြီး ဒီအေဂို ဒါလောဒ့် နှင့် ဘရန်ဒန် ၀ီလီယံ သည် လည်း တိုးတက်ကောင်းမွန်ပြည့် ဆက်လက် နောက်တန်းကို အားဖြည့်မည် ဖြစ်သည်။
ဟယ်ရီ မက်ဂွီးရား နှင့် ဗစ်တာ လင်ဒီလော့(ဖ်) သည် အလယ်နောက်တန်းတွင် အတွဲညီညီ ကစားနိုင်ပြီး အဲရစ် ဘေလီမှာမူ ဖေဖေါ်ဝါရီ လ ကရခဲ့သော ဒဏ်ရာ မှ နာလန်ထူခါစဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ အသက် ၂၂ ရှိပြီ ဖြစ်သော အက်ဇဲလ် တွမ်ဇီဘီ ကို လည်း မျှော်လင့် နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ ဆိုးရှားသည် နောက်တန်း ပထမကစားသမားနေရာတိုင်း အတွက် အရံနှစ်ဦး စီ မထားခဲ့လျှင် သူ၏ နောက်တန်းအရံများဖြစ်သော ဖီးဂျူန်း, ခရစ်စမောလင်း နှင့် မာကို ရိုဂျို တို့သည် သူတို့၏ လမ်းကြောင်းကို သူတို့စဉ်းစား ရတော့မည်ဖြစ်သည်။
အင်အား – ၀န်ဘီစကာ, ဒါလောဒ့်,လင်ဒယ်လော့(ဖ),မက်ဂွေရား,ဘေလီ,တွမ်ဇီဘီ,ရှော, ၀ီလီယံ
ထွက်နိုင်မည့်စာရင်း- ဂျူန်း, စမောလင်း, ရိုဂျို
ယူနိုက်တက် သည် သူတို့၏ အလယ်တန်း အင်အားမြောက်များစွာရှိပြီး ဆိုးရှားသည် ယခု အခါ သူအလယ်တန်းကို မည်သို့ကိုင်တွယ် ရမှာလဲ ဆိုတဲ့ အချိန် ရောက်ပြီ ဖြစ်တယ်။
ဂျက်ဆီ လင်း နှင့် အန်ဒရီအေ ပိုင်အီရာ သည် ဤရာသီ တွင် တော်တော်ရုန်းကုန်ခဲ့ရပြီး နောက် ၁၂ လတွင် သူတို့ ထွက် သွားမည် ဆိုလျှင် မအံသြ တော့ပါ။ နီမာန်ဂျာ မက်တစ် နှင့် ဂျူအန် မာတာ သည် ၂၀၂၀ တွင် ပျော်ရွင်စွာ ဖြတ်သန်းခဲ့သော်လည်း ၂၀၂၁ တွင် စာချုပ် သက်တမ်းကုန်တော့မည်ဖြစ်ပြီး သူတို့၏ ကစားသမားဘ၀ အတွက် နားသင့်သော အသက်အရွယ် လည်းဖြစ်လာပြီ ဖြစ်သည်။
သူတို့သည် ယခုအခါတွင် စကော့မက်တိုမီနေ, ဖရက် နှင့် ဘရိုနို ဖာနေဒီ(စ်) တို့နှင့် အတူ အလယ်တန်း အင်အားတွင် ကျန်နေခဲ့ပြီး ပေါ ပေါ့ဘာ သည် နောက်ရာသီ အတွက် ဆက်ရှိနေမည် ဖြစ်သည်။ မက်တစ် နှင့် မာတာ တို့ မတည်ငြိမ် မှု အပေါ် ဆိုးရှားသည် အလယ်တန်းအတွက် အားဖြည့်ရန် စဉ်းစားနေသည်။ မက်တစ်နှင့် မာတာ ထွက်သွားခဲ့သည် ရှိသော် ၂၀၂၁ အတွက် တစ်နေရာ လွတ်နိုင်ပြီး ပေါ ပေါ့ဘာ ထွက်ခဲ့လျှင် နှစ် နေရာစာ လွတ်နိုင်သည်။
အင်အား – မက်တစ်, မက်တိုမင်နေ, ဖရက်, ပေါ့ဘာ, ဖာနန်ဒီ(စ်), မာတာ, အသစ်သော စာချုပ်ချုပ်မည့် လူစာရင်း
ထွက်သွားမည့် လူစာရင်း – လင်းဂတ်, ပဲအီရာ
ယူနိုင်တက် အသင်း အတွက် တိုက်စစ်မှုး သည် တစ်နေရာစာ လွတ်နေပြီး အကယ်၍ အိုဒီယွန် အီဂါလို သာ သူ၏ အသင်း ရှန်ဟိုင်းရှန်ဟွာ ကို ပြန်သွားခဲ့လျှင် နှစ်နေရာစာ လွတ်နေမှာ ဖြစ်သည် နိုင်ဂျီးရီးယန်းသား လေးသည် အိုးထရက်ဖိုဒ့်အတွက် ခဏတာ ကစားခဲ့ပြီး ၄ ဂိုးသွင်းခဲ့သည်။ ဆိုးရှား အနေနှင့် အသက်ငယ်ရွယ်ပြီး အန်ထော်နီ မာရှယ် နှင့် အတူတူ ကစားနိုင် ရန် ရှာဖွေသင့်ပြီ ဖြစ်သည်။
အင်အား – ရက်ဖိုဒ့်, ဂျိမ်း, ဂရင်းဝုပ်, မာရှယ်, အင်ဂလို/စာချုပ်သစ်, စာချုပ်သစ်
ဆိုးရှား သည် သက်ငယ်သော ကစားသမား ကလပ်တွင် ၀င်ရောက် ကစားခြင်းကြောင့် သူ၏ သက်ကြီးပိုင်း ကစားသမားများ ကို ဖြတ်ချ နိုင်ပြီ ဖြစ်တယ်။ တီမောတယ် ဖိုဆု-မန်ဆာ အနေနှင့် သူသည် နောက်ရာသီအတွက် ယူနိုက်တက် နှင့် ထိုက်တန်ကြောင်း ပြသနိုင်ရန် ကြိုးစားနေပြီး တာဟစ်ချောင်း သည် နောက်ရာသီအတွက် ပထမ ၁၁ ယောက် တွင် ပါဝင်သင့် သည်ဟု ယူဆပါတယ်။
အိန်ဂျယ် ဂိုးမီ(စ) သည် ယူနိုက်တက် အတွက် ထိုက်တန်ကြောင်း သေသေချာချာ ကစားပြရမည့် အချိန် သည်ကုန်ဆုံးနေပြီ ဖြစ်တယ်။ သို့သော် အခြားသော ကစား သမားများ ဖြစ်သော ဒိုင်လန် လက်ဗစ် နှင့် ဂျိမ်း(စ) ဂါနာ သည် လည်း နောက် ရာသီ အတွက် ပိုမို ကောင်းမွန် စွာကစား နိုင်မည် ဟု မျှော်မှန်း ရပါ သည်။